မအောင်မြင်သူရဲ့ မှတ်စုများ (၂) – JQY's Blog
မအောင်မြင်သူရဲ့ မှတ်စုများ (၂)
ဆက်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မှားမှာပဲ။ ငါ့မှတ်စု တခုလုံး အဆိုအမိန့်လိုလို ဆုံးမစာလိုလိုတွေနဲ့ ပြည့်နေတာ။ အကြီးအကျယ် အောင်မြင်ထမြောက်သွားခြင်းရဲ့ အစမှာလည်း စိတ်ကူးဉာဏ်၊ စိတ်ကူးဉာဏ်ရဲ့ သတ္တိ၊ စိတ်ကူးဉာဏ်ရဲ့ တန်ဖိုးကို ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်းမျှသာ ဖြစ်တယ်တဲ့။ အကြီးအကျယ် အောင်မြင်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲ မသိဖူးတော့ စိတ်ကူးဉာဏ် ဆိုတာ ငါ့မှာ မရှိတာ သေချာသွားလေလေ့။ စိတ်ကို ဖွင့်ထားပြီး တစ်စုံတစ်ရာကို လက်ခံရရှိဖို့ အသင့်ရှိကာ ဇွဲ၊ ယုံကြည်မှု၊ သတ္တိများနှင့် ပြည့်စုံပါစေ။ ကြည့်ရတာ ငါရွှေဥဒေါင်းစာအုပ်ထဲကနေ ကူးထားသလိုပဲ။ စိတ်တွေအကြောင်းချည်းပဲ ဆက်ပါနေတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ဆွဲငင်အားရှိတဲ့ မေတ္တာ၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်စွာ အသုံးချခံရသော လိင်ဓာတ်၊ မျှော်လင့်ခြင်းဆန္ဒတွေသာ စိုးမိုးနေရမယ်။ မရှိသေးရင် ရှိအောင်လုပ်။ ရှိပြီးလို့ မကြီးသေးရင်း ပွားများပေးရမယ်ဆိုပဲ။ Facebook မှာ အပေါ်ဆွဲ အောက်ဆွဲ လုပ်ဖို့လိုနေသေးသလို COC မှာလည်း Upgrade တွေ လုပ်ဖို့ အများကြီးလိုနေပါတယ်ဆိုမှ ခွီး။ အဲဒါနဲ့ ဘယ်လို ဆက်အချိန်ဖြုန်းမလဲ။ နောင်တောင်းဆရာတော်က ပြောတယ်။ ငါချည်းပဲ သိလို့ ငါချည်းပဲ လုပ်နေရတာလား။ တခြားဘုန်းကြီးတွေ ဘာကြောင့် နေနိုင်တာလဲ။ သူတို့ မသိတာလား တဲ့။
ဦးစွာ ကိုယ့်အစွမ်းအစကို ယုံကြည်ပါ။ နောက် သဘာဝဓမ္မရဲ့ တန်ခိုးကြီးမားပုံကိုလည်း ယုံကြည်ပါ။ GSMI က ဆရာသက်နိုင်ထွန်း ပြောတာကို သွားသတိရမိသေး။ လူဟာ သဘာဝနဲ့ ညှိပြီးနေထိုင်တတ်ပါတယ်။ အဲ ပြီးတော့ သဘာဝတရားကြီးကလည်း လူတွေအတွက် အခက်ကြီး သိပ်တွေ့စေမယ်လို့ မထင်ပါဘူးဆိုပဲ။ သူက သစ်ပင်တွေ တအားခုတ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောတာ။ သစ်ပင်မရှိတော့ရင်လည်း ငါတို့ နေတတ်မယ်ထင်ပါတယ်တဲ့။ သိဘူး။ ငါက ဘာမှ မယုံကြည်တော့ ဘယ်သဘာဝဓမ္မကိုမှလည်း မတွေ့ဖူးဘူး။ ဦးနှောက်ထဲက စိတ်ကူး ဦးနှောက်ထဲမှာ မပျောက်စေနဲ့။ နှလုံးခိုက်အောင် စိတ်ကူးပါ အလဲ့။ တယ်ဆိုတဲ့စာပဲ။ ဒါ ငါတို့ သင်နေတဲ့ သင်တန်းထဲက 3H နဲ့ ညှိတယ်။ လူတယောက်ဟာ အလုပ်လုပ်ရင် နှလုံးသားက ခံစားရမှ လုပ်။ ဒါဆို အောင်မြင်လွယ်တယ်။ မဆိုးဘူး။ ဒီမှတ်စုထဲက ဒီစာတန်းက ခုထိ နည်းနည်းကိုက်သေးတယ်။ ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်းတွေကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မချစ်မနှစ်သက်တာ မဖြစ်ပါနဲ့ တဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆိုတော့ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်းပေါ့။ မနေနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ မုန်းမိတာပဲ။ ဆေးလိပ်သောက်ရင် ဒါနောက်ဆုံးတလိပ်ဆိုပြီး သောက်တာ ဘယ်တော့မှ မဆုံးနိုင်တဲ့ ငါ့ကိုယ်ငါ မုန်းတာပဲ။ လူတွေကို အလွယ်တကူ လိမ်တတ်တဲ့ ငါ့ကိုယ်ငါ မုန်းတာပဲ။ ယုံကြည်ခြင်းကို မွေးမြူယူလို့ ရတယ်တဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလား။ သူများကိုလား။ အပြောလွယ်သလောက် တော်တော်ခက်တဲ့ဟာတွေ။
အကြောင်းတရားတခုခုကို အထပ်ထပ်နှလုံးသွင်းလိုက်တိုင်း အကျိုးတရားဖြစ်ဖြစ်လာတာ တွေ့ဖူးတယ်မလားတဲ့။ အရမ်းဖြစ်ချင်လာတဲ့အခါ ဖြစ်တာပဲ။ ရည်ရွယ်ချက်တခုကို လုပ်မယ်ကြံတိုင်း ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုရှောင်။ တချို့ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေကိုပါ ရှောင်ရမယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူးတွေ လာလာပြောနေတယ်။ “ငါမှန်းထားတဲ့ ရည်မှန်းချက်အတိုင်း ပြည့်စုံအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိ ငါ့မှာ အမှန်ရှိတယ်။ ရည်မှန်းချက်အတိုင်း ပြီးပြည့်စုံအောင် မနားမနေ ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ ငါဆောင်ရွက်မယ်လို့ ငါသစ္စာပြုတယ်၊ ငါ့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့် ငါ့အစွမ်းသတ္တိတွေ ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ ငါသိတယ်။ ငါဟာ ပြီးပြည့်စုံနေတဲ့ ဘယ်လို လူဖြစ်တယ်ဆိုတာ ငါတွေးတောနေရမယ်၊ ငါ့ဆန္ဒအစွမ်းကြောင့် ငါ့ရည်ရွယ်ချက် ပြည့်စုံဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုခု ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ ငါသိတယ်။ ငါ့သတ္တိကို ငါယုံအောင် နေ့စဉ် ၁၀ မိနစ်လေ့ကျင့်မယ်။ တိကျတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိပြီး ရည်ရွယ်ချက် ပြည့်စုံအောင် ယုံကြည်ခြင်း မရှိသမျှ ဆက်လက်ကြိုးစာမယ်။ ငါ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ မှန်ကန်ခြင်း၊ တည့်မတ်ခြင်း အပေါ်အခြေမခံခရင် ဘယ်လိုမှ တည်တံ့မနေဘူးဆိုတာ ငါသိတယ်။ ငါနဲ့ ပတ်သက်သူ အကျို့မဲ့ကိစ္စ မနာလိုမှု တကိုယ်ကောင်းဆန်မှုတွေကို ငါပယ်ပြီး မိမိသူတပါး အကျိုးရှိမယ့် ကိစ္စနှင့် မေတ္တာစိတ်သာ ငါ့ကိုယ်ထဲ ငါ့စိတ်ထဲရှိနေရယ်။ ကြောက်စိတ်ကို လက်ခံမိရင် တိုးပြီး ကြောက်လာတယ်။ ရဲရင့်တဲ့ စိတ်ကို လက်ခံမိရင်လည်း တိုးပြီး ရဲရင့်လာမယ်။ တက်ကြွစိတ်မွေးရင် ပိုတက်ကြွလေပဲ” ဒီမှတ်စုတွေ တင်းပြည့်နေတဲ့ ငါ့မှတ်စုဟာ ငါ့ကထားခဲ့လို့ ငါ့ကို ထားခဲ့လေပေါ့။
အလဲ့ အင်္ဂလိပ်လို မှတ်ထားလိုက်သေးသဟ။ Knowledge isatresure and power တဲ့။ နောက်တကြောင်းက Health is better than wealth ကပါသေး။ စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းလုံးက တော်တော်လေး လက်ခံချင်စရာ ကောင်းတယ်။ ငါ နောင်တောင်းမှာနေတုန်းက ဒီ knowledge ဆိုတဲ့ ကောင်ကြီးကြောင့် ငါ သင်တန်းနည်းပြဖြစ်လာခဲ့တာ။ သင်တန်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် ငါ့ကိုပဲ အားထားရသလို ဖြစ်လာတာ။ သင်တန်းမှာဆိုလည်း ကောင်းကောင်းလေး ပြောနိုင်တာ။ health ကျတော့ မှန်လွန်းလို့ ခက်နေတာ။ ဒါပေမယ့် wealth မရှိရင်တော့ health က သိပ်မသေချာဘူး ဟဲဟဲ။ ငါ့ခမျာ ဆေးလိပ်မှ မဖြတ်နိုင်ဘဲ။ တနေ့က စန္ဒရာဘူးလော့ခ် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ၂၈ ရက် ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကို ကြည့်တယ်။ ဆေးဖြတ်ပုံလေးကို ရိုက်ပြထားတာ။ တော်တော်ကောင်း။ ငါကသာ မဖြတ်နိုင်ဖြစ်နေတာ။ သူကလည်း လူထုဒေါ်အမာစကားလိုပဲ။ မြတ်စွာဘုရားပြောတာနဲ့ ညှိရင်တောင် ရသေး။ တခွန်းတည်းပဲ ကျန်တော့တယ်။ စိတ်သာ ရှင်စော ဘုရားဟော လို့။ နောက်တကြောင်းက တကယ့် နာမည်ကြီးပဲ။ No pain, no gain. လေ။ ဆက်ပြီးတော့ Know yourself, like yourself and be yourself. ဆိုပဲ။ ကလေးအထာတွေ။ မအောင်မြင်သူ ဆိုမှတော့ ဒီမှတ်စုတွေ အလကားပေါ့ဗျာ။